क्योटो! २ Best उत्तम आकर्षणहरू: फुशिमी इनारी, कियोमिजुडेरा, किंकाकुजी आदि। Best of Japan
रुरीकोइन, क्योटो, जापानको शरद पातहरू = एडोब स्टक
क्योटो एक सुन्दर शहर हो जुन परम्परागत जापानी संस्कृतिमा आउँदछ। यदि तपाईं क्योटोमा जानुहुन्छ भने, तपाईं जापानी परम्परागत संस्कृति तपाईंको मनको सामग्रीमा मजा लिन सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म पर्यटकीय आकर्षणहरूको परिचय दिनेछु जुन क्योटोमा विशेष गरी सिफारिस गरिएको छ। यो पृष्ठ लामो छ, तर यदि तपाईं अन्तमा यो पृष्ठ पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंले क्योटोमा भ्रमणका लागि आवश्यक आधारभूत जानकारी पाउनुहुनेछ। मैले लिंकहरू पनि जोडेँ जस्तै प्रत्येक वेबसाइटको लागि आधिकारिक वेबसाइट, कृपया यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
>> यदि तपाईंले तलको भिडियो क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि क्योटो रातमा पनि सुन्दर छ <
किंकाकुजी मन्दिर = गोल्डन मंडप
जिन्काकुजी मन्दिर = रजत मंडप
दार्शनिकहरूको पैदल यात्रा (Tetsugaku No Michi)
Eikando Zenrinji मन्दिर
यासाका जिन्जा तीर्थ
क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो गोशो)
Toei क्योटो स्टूडियो पार्क
अरशिआमा, क्योटो, जापान = एडोब स्टकमा सुन्दर बांस ग्रोभ
क्योटो टोकियोको 3682किलोमिटर पश्चिममा एउटा सुन्दर शहर हो। यो लगभग २ घण्टा १ 15 मिनेट टोक्यो बाट छिटो Shinkansen द्वारा छ।
क्योटो लगभग १1000०० बर्षको लागि जापानको राजधानी थियो जबसम्म राजधानी १ Tok1869 in मा टोकियोमा सरेन। जापानको अनौठो संस्कृति यस शहरमा निर्माण गरिएको छ। आज पनि क्योटोमा धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। यहाँ परम्परागत काठका घरहरू पनि छन् "क्यो-माचिया" यहाँ र त्यहाँ। यदि तपाईं Gion आदि जानुहुन्छ, तपाईं सुन्दर ढंगले लुगा लगाएका आइमाईहरू, मैको र Geiko देख्नुहुनेछ।
जब तपाईं क्योटोमा मन्दिर र मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं छक्कै पर्नुहुनेछ कि बगैंचामा रूखहरू र खोलाहरू धेरै सुन्दर छन्। क्योटोका मानिसहरूले प्रकृतिलाई लामो समयदेखि माया गर्थे। तपाईं त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
क्योटो पहाडहरूले घेरिएको बेसिनमा अवस्थित छ। र गोशो (शाही दरबार) बेसिनको उत्तरी भागमा अवस्थित छ, र पुराना सडकहरू राम्रो क्रममा छन्। JR क्योटो स्टेशन दक्षिणमा छ। प्रसिद्ध मन्दिर र मन्दिरहरू वरपरका पहाडहरूसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक छन्। तिनीहरू विशेष गरी पूर्वमा हिगेशियामा भनिने पहाडको नजिक जम्मा हुँदैछन्।
क्योटोमा, एक सुन्दर नदी "कामोगावा" उत्तरबाट दक्षिणमा बग्दछ। क्योटोको मध्य भागमा त्यहाँ "शिजो ओहाशी" नामको ब्रिज छ। यस पुल वरपरको क्षेत्र क्योटोको सबैभन्दा व्यस्त शहर हो। नजिकको छेउछाउमा त्यहाँ जिओन छ जहाँ अझै सुन्दर गीशा (जिको र मैको) हिंडिरहेका छन्।
क्योटो १००० वर्षको लागि जापानको राजधानी भएकोले त्यहाँ धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन् जसले जापानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसबाहेक, दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान क्योटोको सडकले थोरै क्षति पुर्‍याएको थियो, त्यसैले मन्दिर र मन्दिरहरूको वरिपरिको पुराना शहरहरू र त्यहाँको जीवन संस्कृति पनि बाँकी थियो। अर्को शब्दमा, क्योटो एक थीम पार्क जस्तो शहर हो जहाँ तपाईं पुरानो जापान भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, कृपया तलको रूपमा सुन्दर मन्दिरहरू र मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहोस्।
जापानमा सबैभन्दा सिफारिश गरिएको मन्दिर र मठहरूको बारेमा मैले निम्न लेखहरू लेखें। क्योटोमा दर्शनीय स्थलहरूको बारेमा लेख्दा, त्यहाँ धेरै भागहरू छन् जुन लेखलाई सबै माध्यमबाट नक्कल गर्दछ। यस पृष्ठमा लिंक गरेर म तपाईंलाई यस पृष्ठमा ओभरल्यापिंग पार्ट्सको बारेमा जानकारी दिनेछु, त्यसैले कृपया यदि तपाईंलाई आपत्ति छैन भने पृष्ठमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
क्योटोमा पुरानो समयका प्रसिद्ध चाडहरू छन्। म तिनीहरूलाई यो पृष्ठमा पनि परिचित गर्दछु, तर जापानमा चाडपर्वहरूमा निम्न लेखहरूका धेरै अधिव्याप्त भागहरू भएकाले म तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लिंक गर्नेछु।
वसन्त, गर्मी, शरद र जाडोको परिवर्तित matchतुहरू मिलाउन पुरानो दिनदेखि हामीले विभिन्न चाडहरू हौं। यस पृष्ठमा, म मौसमी चाडपर्वहरूको परिचय दिनेछु जुन म तपाईंलाई विशेष रूपमा सिफारिस गर्न चाहन्छु। जब तपाईं जापान आउनुहुन्छ, कृपया त्यो उत्सवको आनन्द उठाउनुहोस् ...
क्योटोमा शरद leavesतुका पातहरूका धेरै दृश्यहरू छन्। यस पुरातन राजधानीमा, धेरै सुन्दर जापानी बगैंचा धेरै वर्षदेखि निर्माण गरिएको छ, र म्याप्पल र अन्य बोटहरू लगाइएको छ। कृपया क्योटोमा शरद leavesतुको पातहरूको दृश्यहरूको बारेमा निम्न लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
जापानमा, तपाइँ सेप्टेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको शुरुमा सुन्दर शरद पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। शरद leavesतु पातहरूको उत्तम मौसम सम्पूर्ण स्थानमा पूर्ण रूपमा भिन्न हुन्छ, त्यसैले कृपया जापानको यात्राको क्रममा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म फूलहरू स्पॉटहरू परिचय गराउनेछु ...
तपाइँ कुन चाहानुहुन्छ, Kinkakuji वा Ginkakuji? यस पृष्ठमा, मलाई क्योटो प्रतिनिधित्व गर्ने यी दुई मन्दिरहरूको सुन्दर फोटोहरू परिचय गराउँनुहोस्। किंकाकुजी र जिन्काकुजीको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया तलका लेखहरू हेर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका किंकाकूजी र जिन्काकुजी म्यापको जिन्काकुजी नक्शा जिन्काकुजीको फोटो र किंकाकुजीको फोटोहरू ...
क्योटोमा कहिलेकाँही यो जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म सुँघ्छ। यद्यपि, त्यहाँ केहि समयहरू छन् कि हिउँ पग्लिन बिना ढेर गर्न सक्दछ। यदि तपाईं हिउँ दिन हो जब तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। कृपया बिहानको बिहान किन्काकुजी मन्दिर र अरशियामा जस्ता दर्शनीय स्थलहरूमा जानुहोस्। ...
यदि तपाईं जापानमा शरद पातहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म क्योटोलाई सिफारिश गर्दछु। क्योटोमा कुलीन, भिक्षुहरू र भिक्षुहरूले एक हजार बर्ष भन्दा बढि सुन्दर फूलहरू पाएका छन्। यदि तपाईं मध्य नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरको सुरूमा जानुहुन्छ भने, तपाईं अचम्मको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। क्योटोमा विभिन्न ठाउँहरूमा विश्व। यस पृष्ठमा, म ...
यदि तपाईं क्योटो भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, ऐतिहासिक पहाडी सडकहरूमा टहल्न निश्चित गर्नुहोस्। विशेष रूपमा, म सिफारिस गर्दछ कि सन्नेई-जका (सन्नेन-जका) र निनी-जाका (निन्न-जका) कियोमिजु-डेरा मन्दिरको वरपर। त्यहाँ धेरै फेसनल स्मारिका पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्। मलाई लाग्छ तपाईंसँग समय छ! क्योटोम्यापमा ऐतिहासिक पहाड सडकहरूको सामग्रीहरूका फोटोहरू ...
जापान अझै पनी "geisha" संस्कृति छ। गीशा महिलाहरू हुन् जसले आफ्ना पाहुनाहरूलाई जापानी नृत्य र गीतहरूको साथ सम्पूर्ण हृदयले मनोरन्जन गर्छन्। गीशा एदो अवधिमा अवस्थित अवस्थित "Oiran" भन्दा पूर्ण भिन्न छ। क्योटोमा, गेशालाई "गिगी" भनिन्छ। प्रशिक्षु युवा गेशालाई "maiko" भनिन्छ। भर्खरै, महिलाहरू जसले काम गरे ...
क्योटोमा, शरद Novemberतु नोभेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको सुरुतिर पुग्दछ। यदि तपाईं क्योटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, म सिफारिस गर्दछु कि एकान्डो जेनरिन-जी मन्दिर पहिले। करीव 3000००० नक्शा यहाँ राखिएको छ। यस मन्दिरलाई यसको सुन्दर शरद leavesतु पातहरूको लागि १००० बर्ष भन्दा बढि प्रशंसा भइरहेको छ। यद्यपि, चरम समयमा, तपाईंले ...
क्योटोमा सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण मध्ये एक Fushimi Inari Taisha Shrine हो। यो मठमा गहिरो जान दिनुहोस्! यो एक घण्टा सहित Fushimi Inari Taisha Shrine को प्रवेशद्वार बाट शिखर सम्म पुग्न लगभग १ घण्टा 1० मिनेट लिन्छ। अवश्य पनि तपाई पछाडि फर्केर जान सक्नुहुन्छ। यद्यपि, ...
क्योटोको रुरीकोइन मन्दिर यसको सुन्दर ताजा हरियाली र शरद पातहरूको लागि परिचित छ। यो मन्दिरको रहस्यमय कोठा छ। कोठामा भएको टेबल ऐनामा जस्तै सजिलिएको छ। यस कोठामा तपाईं यस पृष्ठ जस्तो दृश्य दृश्यहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो मन्दिर सामान्यतया बन्द हुन्छ। जे होस्, यो ... को लागी खुला छ
केन्द्रीय क्योटोमा हिउँको दृश्य हेर्न केही अवसरहरू छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं उत्तरी क्योटोको किफुन, कुराम वा ओहारा जानुहुन्छ भने, त्यहाँ भव्य हिउँ दृश्यहरू हेर्ने अपेक्षाकृत उच्च संभावना छ। तपाईं शान्त क्योटो खोज्न किन जानुहुन्न? सामग्रीको तालिका Kifune, Kurama, को फोटोहरू ...
>> फोटोहरू: क्योटोमा कामोगावा नदी
>> फोटोहरू: क्योटोमा Nanzenji मन्दिर
>> तस्विरहरु: दाइतोकुजी मन्दिर - प्रकृति संग तालमेलको जेन को संसार
>> फोटोहरू: क्योटोमा कोडाईजी मन्दिर
>> फोटोहरू: क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो गोशो)
>> फोटोहरू: क्योटोमा चेरी फूल
>> फोटोहरू: गर्मीमा पारम्परिक क्योटो
>> फोटोहरू: जिदाई मत्सुरी महोत्सव
>> फोटोहरू: टोफुकुजी मन्दिर, क्योटोमा शरद colorsतु र colorsहरू
>> फोटोहरू: क्योटोको अरशिअमामा शानदार रोशनी "हानाटुरो"
क्योटो, जापान = शटरस्टकमा Fushimi Inari Taisha मन्दिरमा रातो तोरी गेट्स
Fushimi Inari Taisha Shrine दक्षिणी क्योटो, जापान = शटरस्टकमा अवस्थित छ
जापान भ्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टुरिष्टका लागि फुशिमि ईनारी श्राइन शीर्ष आकर्षणको सूचीमा थिए। यो तीर्थस्थलमा करिब १०,००० रातो तोरी ढोका छन् यी रहस्यमय रातो फाटकहरूको मुनि हिड्दा, आगन्तुकहरू रहस्यमय संसारमा प्रवेश गर्छन्।
यो मन्दिर क्योटो शहरको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ। नजिकको स्टेशनहरू JR Inari स्टेशन र Keihan रेखा को Fushimi-Inari स्टेशन हो। यदि तपाईं जेआर इनारी स्राइनमा पुग्नुभयो भने, स्टेशनबाट फुशमि इनारीसम्म पुग्न जारी छ। यदि तपाईं केहानको फुशिमी इनारी मन्दिरमा जानुहुन्छ, Fushimi Inari लगभग5मिनेट छ।
Fushimi Inari Shrine लाई, यति धेरै मानिसहरू छुट्टीहरूमा आउँछन्। यदि तपाईं यस मन्दिरमा शान्त समय बिताउन चाहानुहुन्छ भने, म सप्ताहको दिन जान सिफारिस गर्दछु।
>> फोटोहरू: क्योटोमा Fushimi Inari Taisha Shrine
>> Fushimi Inari Taisha तीर्थ को बारे मा विवरणको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
क्योटो शहरमा सान्जुसानेन्डो, जापान = शटरस्टक
माथिको तस्वीरमा देखिए अनुसार संजुसानेन्डो एक लामो बौद्ध मन्दिर हल हो जुन १२० मिटर उत्तर र दक्षिणमा छ। यस्तो लामो काठको निर्माण संसारमा विरलै दुर्लभ छ।
यो लामो मन्दिर हल सम्राट गो-शिराकावाका लागि ११1164 मा टायरा-नो-कियोमोरीले निर्माण गरेका थिए जो त्यतिबेला शक्तिशाली व्यक्ति थिए। त्यसबेला यो विशाल मन्दिरको भाग थियो। आगोको कारण मन्दिर १२ 1249 in मा नष्ट भयो। र १२1266 मा मात्र यो हल पुनर्निर्माण गरियो।
यो लामो मन्दिर हलमा करुण देवी, कन्ननको १००१ मूर्तिहरू छन्। ती बुद्ध मूर्तिहरू लाइनमा हेराइ एक उत्कृष्ट कृति हो।
"Sanjusangen" को अर्थ जापानीमा "inter 33 अन्तराल" हुन्छ। यो भवनको समर्थन स्तम्भहरूका बिचमा comes 33 नम्बर अन्तरालबाट आउँदछ। छोटकरीमा, यो नामले यो संकेत गर्दछ कि यो यति लामो मन्दिर हल हो।
यस मन्दिरमा तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा लामो समयदेखि आयोजित भइरहेको छ। मन्दिर हलको छेउमा, यो प्रतिस्पर्धा गरियो कि करिब १२० मिटर टाढा कति बाणहरू राख्न सकिन्छ। आज प्रत्येक वर्ष, मन्दिर हलको नजिक a० मिटर स्थलको साथ प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरिन्छ।
संजुसानेन्डो पहुँच गर्न दुई तरिकाहरू छन्। (१) १० मिनेट जेआर क्योटो स्टेशनबाट १०० मिनेट (१०० · २०1 · २०10 स्ट्रेनहरू, बस "हकुबुत्सुकन-संजुसानेन्डो-माई (संग्रहालय संजुसानेन्डो)" "। (२) i मिनेट कीहान शिचीजो स्टेशनबाट पैदल दूरीमा।
>> संजुसानेन्डो को विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
क्योटो जापानमा कियोमिजु-डेरा मन्दिर = शटरस्टक
जापानी परम्परागत शपिंग स्ट्रीट, क्योटोमा जापान = शटरस्टक
क्योटोजुदेरा मन्दिर क्योटोमा सबैभन्दा प्रसिद्ध मन्दिरहरू मध्ये एक हो। यो मन्दिर क्योटो शहरको पूर्वी भागको पहाडहरूमा फैलियो। माथिल्लो चित्रमा देखिए अनुसार मुख्य हल चट्टानमा बनाइएको छ। "कियोमिजु-नो-बुटाई" भनिने मुख्य हलबाट बाहिर निस्किने काठ स्टेजबाट, तपाईं क्योटोको पूरा शहर देख्न सक्नुहुनेछ। १ height मिटर उचाईको यस चरण अन्तर्गत, तपाईं सुन्दर शरद पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ नोभेम्बरको ढिलोदेखि डिसेम्बरको सुरूवातसम्म।
कियोमिजुदेरा मन्दिरको लागि, क्योटो स्टेशनबाट २०206 र १०० लाइनको बस लिनुहोस् र "कियोमिजु-मिचि" मा जानुहोस्। यो त्यहाँबाट-मिनेट पैदल छ।
यदि तपाईं ट्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो केहिहान ट्रेनको कियोमिजु-गोजो स्टेशनबाट कियोमिजुदेरा मन्दिरसम्म २० मिनेट जति छ। स्मारिका पसलहरू र स्ट्रिट फूड स्टोरहरू ope्याudeमा (कियोमिजु-जाका) क्यियोमिजुदे मन्दिरको लगभग १ किलोमिटरमा लाइनमा छन्। ती पसलहरूमा जाँदा हिंड्न रमाईलो छ।
क्योटोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन्: फुशिमी इनारी तीर्थ तीर्थ, किंकाकुजी मन्दिर र कियोमिजुदेरा मन्दिर। कियोमिजुदरा मन्दिर क्योटो शहरको पूर्वी भागमा रहेको पहाडको भित्तामा अवस्थित छ र मुख्य हलबाट १ meters मिटर उचाइमा अवलोकन भव्य छ। आउनुहोस् ...
>> फोटोहरू: क्योटोमा ऐतिहासिक पहाडी सडकहरू-सन्नेई - काका, नाइनी-जका, इत्यादि।
>> कियोमिजुदेरा मन्दिरको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
किन्काकू-जी, गोल्डन प्यावेलियन, क्योटो, जापानमा एक जेन बौद्ध मन्दिर = शटरस्टक
क्योटो, जापानमा किन्काकुजी मन्दिर = शटरस्टक
यदि तपाईं जापानीलाई जापान प्रतिनिधित्व गर्ने मन्दिरको लागि सोध्नुहुन्छ भने, धेरै जापानीहरूले पहिले किन्काकुजी मन्दिरको उल्लेख गर्नेछन्। किंकाकुजी यस्तो प्रसिद्ध मन्दिर हो।
यस मन्दिरमा सुनको मंडप पूर्ण रूपमा गिल्टले ढाकिएको छ। यदि तपाइँ एक सुन्दर पोखरीको पछाडि सुनौलो पवेलियन हेर्नुभयो भने, तपाइँ पक्कै तस्विर लिन चाहानुहुन्छ। यो गोल्डन प्यावेलियन एक शानदार सुन्दरता छ। धेरै व्यक्तिले यस गोल्डेन मंडपमा पहिले नै हेरेका व्यक्तिहरूले समेत वास्तवमा यो भवन देख्दा यति सुन्दरताका लागि आफ्नो शब्दहरू गुमाउँछन्।
किंकाकुजी क्योटो शहरको एक सानो उत्तरी भाग हो। यदि तपाईं जेआर क्योटो स्टेशनबाट बसमा किन्काकुजी जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं १०१ वा २० lines लाइनको बसमा चढेर "किनाकुजी-मिची" मा जान सक्नुहुन्छ। यो १० मिनेट पैदल यात्रा हो जुन बस बस स्टपबाट किन्काकुजी सम्म जान्छ।
यदि तपाईं नोभेम्बर जस्ता भीड अवधिमा किन्काकुजी जानुहुन्छ भने क्योटो शहरको सडकमा यातायात जामको खतरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, मेट्रो करासुमा लाइन द्वारा Kitaoji स्टेशन जानुहोस्। किंकाकुजीका लागि, बस लिनुहोस् जस्तै १०१ लाईन, १०२ लाइन वा २०101 लाइन किताओजी बस टर्मिनलबाट र किन्काकुजी-मिचिमा उड्नुहोस्।
>> फोटोहरू: किंकाकुजी बनाम जिन्काकुजी - कुन मनपर्दो छ?
>> किंकाकुजी मन्दिरको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
हिगाशीयामा जिल्लाको क्योटो = शटरस्टकमा सुन्दर जिन्काकुजी मन्दिर
जिन्काकुजी क्योटो सहरको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित एक धेरै प्रख्यात मन्दिर हो।
यस मन्दिरको आधिकारिक नाम जिशोजी मन्दिर हो, तर यो मन्दिर किंकाकुजी (गोल्डन पवेलियन) सँग भिन्न छ र यसलाई जिन्काकुजी भनिन्छ (जसको अर्थ जापानी भाषामा सिल्भर पवेलियन) हो।
यदि किंकाकुजी सूर्य हो भने, यो भन्न सकिन्छ कि जिन्काकुजी चन्द्रमा हो।
गिन्काकुजी योशीमासा अशोककाले निर्माण गरेका थिए जो १ Mur1482२ मा मुरोमाची शोगुनको शोगुन थिए। योशिमसले किनाकुजीको सन्दर्भमा यो भवन निर्माण गरेको हो भनिन्छ। यो भवन मूल रूपमा उनको विला थियो। यस विलाको आधारमा उनले धेरै भिक्षुहरू र कुलीनहरूसँग कुराकानी गरे, र जेनमा आधारित संस्कृति सिर्जना गरे जसलाई "हिगाशियामा संस्कृति" भनिन्छ।
जबकि किंकाकुजी दर्शनीय छ, जिन्काकुजी जेनमा आधारित छ र धेरै सरल छ।
किंकाकुजीमा, भवन मुख्य पात्र हो। यसको विपरित, भवनहरू जिन्काकुजीमा केन्द्रित छैनन्।
गिन्काकुजीमा भवनको अतिरिक्त वरपरका बगैंचा र रूखहरू अति सुन्दर छन्।
माथिको चित्रमा देखाइए जस्तै जिन्काकुजीमा सेतो बालुवा बगैंचा छ। योशीमासाको युगमा रात कालो थियो। यद्यपि यो भनिन्छ कि बगैंचा चाँदनीबाट चम्कियो, र भवन उज्यालो रातमा उज्यालो भयो।
भवनको वरपर एउटा ज forest्गल छ जहाँ सुन्दर काई बढ्यो। यो काई पनि भद्र छैन तर यसले गहिराईको साथ आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
जिन्काकुजीको भवनलाई "सिल्वर पवेलियन" भनिन्छ, तर भवन चाँदीको पन्नीले अडिएको छैन। यो मन्दिर टोकुगावा शोगुनेट युगदेखि नै "चाँदीको मंडप" भनेर चिनिन थाल्यो। यस मन्दिरलाई अक्सर किंकाकूजी (गोल्डेन पवेलियन) सँग विरोधाभास गरिएको हुनाले यसलाई यस्तै भनिन थाल्यो।
क्योटो i जापानको GInkakuji मन्दिर (रजत पवेलियन) वरपर राखिएको हरियो, काई बगैचा। धेरै हरियो पातहरू, काई र पानीले सुन्दर र भव्य दृश्यहरू बनाउँदछ = शटरस्टक
जिन्काकुजी मन्दिर, क्योटो जापान = शटरस्टकमा सुन्दर शरद leavesतु
शरद leavesतुको पातमा मौसम क्योटो, Tetsugaku no Michi (दार्शनिकको चाल) बाट बिहान हेर्नुहोस् = शटरस्टक
दार्शनिकहरूको पैदल यात्रा (Tetsugaku No Michi) धेरै लोकप्रिय हिड्ने मार्ग हो जुन क्योटो शहरको पूर्वी भागमा करिब २ किलोमिटर उत्तर र दक्षिणमा हुन्छ। यो उत्तरमा जिन्काकुजी नजिकै सुरु हुन्छ र एकान-डोको नजिकै जारी रहन्छ, पछि वर्णन गर्न सकिन्छ। तपाईं यस ट्रेललाई लगभग -०-2० मिनेटमा हिंड्न सक्नुहुन्छ। दार्शनिकको पैदल किनारमा "ताल बिवा नहर" भन्ने सुन्दर जलमार्ग छ। यो जलमार्ग १०० बर्ष भन्दा बढी पहिले क्योटो सिटीको पूर्वमा कियोटो शहरको ब्वाइवाबाट पानी क्योटो शहरमा ल्याउन निर्माण गरिएको थियो। जलमार्ग वरपर धेरै रूखहरू छन्। त्यसकारण वसन्त cतुमा चेरी फूलहरू फूल्छन्, पातहरू वसन्तदेखि ग्रीष्म growतुमा हुर्कन्छन् र शरद inतुमा तिनीहरू रातो र पहेंलो हुन्छन्।
किनकि यो ट्रेल शान्त छ, यहाँ वरिपरि हिंड्ने सबै शान्त हुनेछन्। भनिन्छ कि २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा क्योटो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए कितो निशिदा, एक दार्शनिकले यस मार्गमा सोचे। उनी जापानका अग्रणी दार्शनिक थिए। पछि, उहाँका चेलाहरू पनि यस मार्गमा हिंड्न आए। यस कारणले यो बिस्तार बिस्तारै "दार्शनिकहरूको चाल" हुन थाल्यो।
जब म क्योटोमा जान्छु म प्रायः यो बाटो हिंड्छु। जिन्काकुजी मन्दिरमा जेनको दुनिया महसुस गरेपछि, तपाईले इल्सान-डो र अगाडि रहेको नानजेन्जी मन्दिरतिर शान्त भई दार्शनिकको पैदल यात्रा गर्दा सिफारिस गरिन्छ। दार्शनिकको वाकमा फ्यान्सी क्याफेहरू छन्, त्यसैले तिनीहरू द्वारा रोक्न यो रमाईलो हुनेछ।
यदि तपाईं दार्शनिकहरूको पैदल यात्राको विस्तृत नक्सा हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तल आधिकारिक वेबसाइटमा नक्सा सिफारिश गरियो। जब तपाईं निम्न क्लिक गर्नुहुन्छ, नक्साको साथ पृष्ठ प्रदर्शित हुन्छ। नक्शा पृष्ठको तल छ। यो जापानी भाषामा लेखिएको हो, तर यो अंग्रेजीसँगै भएकोले तपाईं बुझ्नुहुनेछ।
>> दर्शन पथको बारेमा थप जानकारीको लागि, यहाँ हेर्नुहोस्
Eikando मन्दिर जो क्योटो = AdobeStock मा सबैभन्दा सुन्दर शरद पातहरू भनिन्छ
वसन्त inतुमा पारम्परिक जेन बगैंचा। एकान-डो मन्दिर वा जेनरिन-जी जापानी बौद्ध धर्मको जोडो सम्प्रदायको हुन्। Eikando एक लोकप्रिय स्थलचिन्ह र क्योटो, जापान = शटरस्टकमा जेन मन्दिर हो
यदि तपाईं गिन्काकुजी मन्दिरबाट दार्शनिकको पैदल about० मिनेट जति हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं आइकन्डो जेनरिनजी मन्दिरको नजीक आउनुहुनेछ। तपाईं यस तरीकाले नानजेन्जीमा जान सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं गिरावटमा वा वसन्त ताजा हरियो मौसममा जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि आइकान्डो जान।
करीव 3000००० मानचित्रहरू आइकान्डोमा रोपिएका छन्। हरेक वर्ष, अप्रिल देखि मे सम्मको ताजा हरियो मौसममा, ती नक्शाले नाजुक र सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्दछ। यसबाहेक, तिनीहरू नोभेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको सुरूतिर एक विशाल सुन्दर शरद alतु पातहरू विश्व सिर्जना गर्दछन्।
भनिन्छ कि प्राचीन कालदेखि नै इकोन्डो क्योटोमा सब भन्दा सुन्दर शरद पातहरू हुन्। म तपाइँ दृश्यात्मक आनन्द लिन पनि चाहन्छु।
एकान्डोको सम्बन्धमा, मैले शरद पातमा तल लेखहरूमा परिचय दिएँ। यदि तपाइँ आपत्ति मान्नुहुन्न भने कृपया यी लेखहरू पनि पढ्नुहोस्।
क्योटो, जापान = शटरस्टकमा नानजेन्जी मन्दिरमा सानमन गेट
क्योटो, जापान = शटरस्टकमा नानजेन्जी मन्दिरको सन्म्मन गेटको दोस्रो कथाबाट हेर्नुहोस्
नानजेन्जी जापानको जेन मन्दिरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो मन्दिर हो। जापानमा, क्योटोमा पाँच शीर्ष जेन मन्दिरहरू र कामकुरामा पाँच शीर्ष जेन मन्दिरहरू छन्, तर नान्जेन्जी ती भन्दा माथि स्थित छन्।
नानजेन्जीको स्थापना १२ 1291 १ मा भएको थियो। त्यसपश्चात धेरै पटक भवनहरू आगोले ध्वस्त पारिए, तर १ 17 औं शताब्दीदेखि अहिलेको निर्माण समूह टोकुगावा शोगुनेटको समर्थनमा सुधारिएको छ।
नानजेन्जी भ्रमण गर्ने मानिसहरूले सर्वप्रथम महसुस गर्नेछन् कि विशाल सान्मन (मुख्यद्वार) मा हेर्दा नानजेन्जी एक आधिकारिक मन्दिर हो। यो Sanmon उचाई २२ मिटर छ। हालको सन्मन १ 22२ in मा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। तपाईं यस ढोकाको दोस्रो तला (अवलोकन फ्लोर) चढ्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईले क्योटोको सम्पूर्ण शहर देख्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। जे होस्, कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि काठको पुरानो सीढी एक द्रुत ढलान हो।
शरद र colors्ग टेन्जु-अन वा तेन्जुआन मन्दिरको नानजेन्जी मन्दिर, क्योटो, जापान नजिकको भवनको चारैतिर = शटरस्टक
नानजेन्जी मन्दिर, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा Suirokaku जलमार्ग
Nanzenji को परिसर को बारे मा 150,000 वर्ग मीटर छ। केन्द्रीय हल होजो (राष्ट्रिय खजाना) बाहेक, त्यहाँ धेरै उप-मन्दिरहरू र अन्य पनि छन्। Nanzenji एक ठूलो जटिल हुन सकिन्छ।
केन्द्रीय हलमा धेरै जेन बगैंचा छन्।
तेन्जुआन भनिने उप-मन्दिरमा, तपाईं जापानी परम्परागत भवनहरू मार्फत सुन्दर रूखहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन माथिको फोटोमा देखाइएको छ। वसन्त मा ताजा हरियो र शरद inतु मा शरद पातहरु चित्रहरु को रूप मा अद्भुत छ।
माथिको चित्रमा देखिएझैं त्यहाँ रातो ईट्टाको भवन छ जसको नाम "Suirokaku" नानजेन्जीको मन्दिर भित्र छ। यो मेहराब भवन १ 1890। ० मा निर्माण गरिएको हो। "ताल बीवा नहर" भनिने जलमार्ग यस भवनबाट बग्दछ। यो जलमार्ग १०० भन्दा बढी वर्ष पहिले क्युटो शहरमा बिवा लेकबाट पानी तान्न निर्माण गरिएको थियो। यस भवनको निर्माणको परम्पराको कदर गर्ने व्यक्तिहरूबाट धेरै आपत्ति आएका थिए, तर अब यो नानजेन्जीको लोकप्रिय आकर्षण हो।
नान्जेन्जी सबवे तोजाई लाइनमा केज स्टेशनबाट १० मिनेट पैदल यात्रा गरे।
Nanzenji धेरै ठूलो मन्दिर हो। भित्र धेरै उप मन्दिरहरू छन्। तपाईं विभिन्न अनौठो परम्परागत भवनहरू र बगैंचाहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। क्योटोको सिफारिश गरिएको पाठ्यक्रम भनेको क्योटोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित जिन्काकुजीबाट टेत्सुगाकु-नो-मिचि (फिलॉसर्सको चाल) को वरिपरि घुम्न, र नानजेन्जी र नजिकैको भ्रमण गर्नु हो ...
कयाटो, जापान = शटरस्टकको यासाका जिन्जा मन्दिर
मारुयामा पार्क हिसाशिमा जिल्ला क्योटो, जापानमा यासाका मन्दिर नजिकै सार्वजनिक पार्क हो = शटरस्टक
यासाका जिन्जा तीर्थ परम्परागत तीर्थ हो जुन क्योटोका व्यक्तिहरूमा बढी परिचित हुन्छ। यो तीर्थ स्थान क्योटो शहरको पूर्वी भागमा अवस्थित छ, यो शीजो कावारामाचीको नजिक छ जुन क्योटोको सबैभन्दा व्यस्त शहर हो। शिजो कावारामाचीबाट 8 मिनेट जति पैदल पछि, तपाईं माथि फोटोमा देख्नुहुने यासाका जिन्जा मन्दिरको प्रवेशद्वारमा पुग्नुहुनेछ।
मलाई लाग्छ कि यासाका जिन्जा तीर्थ एकदमै आरामदायक मन्दिर हो। उदाहरणका लागि, किंकाकुजी र गिन्काकुजी शक्तिशाली मानिसहरूका मन्दिर थिए। यसको विपरित, यासाका तीर्थ स्थान भएको छ जहाँ साधारण व्यक्तिहरू प्राय: आउँदछन्। मलाई योसाका जिन्जा श्राइनमा अनौपचारिक भावना मनपर्छ।
यासाका जिन्जा मन्दिरको पछाडि मारुयामा पार्क रहेको छ, जसलाई साकुरा दर्शनीय स्थलको रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले यो सप्ताहन्तमा धेरै व्यक्तिहरूको भीड हो। नजिकैको जिओनमा किमोनो भाडामा लिने पर्यटकहरू यासाका तीर्थ र मारुयामा पार्कमा फोटो खिच्न आउँदछन्।
यासाका जिन्जा तीर्थ 6569मा बनेको बताइएको छ। year औं शताब्दीदेखि यता "जिओन मत्सुरी महोत्सव" हरेक वर्ष यासाका जिन्जा तीर्थको उत्सवको रूपमा आयोजना गरिएको थियो। यो चाड क्योटोमा सबैभन्दा ठूलो चाड हो।
>> कृपया Gion Matsuri चाड को विवरण को लागी यस लेख को लागी हेर्नुहोस्
>> कृपया मारुयामा पार्कमा चेरी फूलहरूको बारेमा यस लेख हेर्नुहोस्
>> Yasaka Jinja Shrine को आधिकारिक साइट यहाँ छ
क्योटो, जापान = शटरस्टकमा साँझमा उनीहरूको भेटको लागि जाँदै गरेको तीन गेशाको पछाडि दृश्य
परम्परागत जापानी किमोनो लगाएका युवतीहरू जायनको क्योटो पुरानो सहर जियानको सडकमा हिड्दैछ = शटरस्टक
Gion यशका तीर्थको पश्चिम तर्फ फैलिएको जिल्ला हो। यासाका श्राइनलाई एक पटक "Gion-sha (Gion Shrine)" पनि भनिन्थ्यो। यस कारणले गर्दा यस क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा "Gion" भनिन्छ।
यो जिल्ला क्षेत्र हो जहाँ तपाईं जापानमा गीशा भेट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले पनि जिओनमा, त्यहाँ धेरै जापानी रेस्टुरेन्टहरू छन् जहाँ गिशासले नाच प्रदर्शन गर्छन् र ग्राहकहरूको मनोरन्जन गर्दछन्। त्यहाँ घरहरू पनि छन् जहाँ गिशा नाच र गाउने अभ्यास गर्छन्। ती मध्ये धेरै परम्परागत काठका भवनहरू हुन् जसलाई "Kyo-माचिया" भनिन्छ। यदि तपाईं Gion मा हिंड्नु भयो भने, तपाईं पुरानो जापानी वातावरण को अनुभव गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
क्योटोमा, गेशालाई सामान्यतया "Geiko" भनिन्छ। गीशा हुनको लागि प्रशिक्षणमा रहेको किशोरी उमेरकी एउटी महिलालाई "मैको" भनिन्छ। जिओनमा गेइको र माईको दिनको समयमा साधारण किमोनोमा हिड्दैछन्। साँझमा, उनीहरूले आफ्नो अनुहारमा सेतो मेकअप, जापानी रेस्टुरेन्टहरूको लागि हेराई लगाउँदछन् इत्यादि। यदि तपाईं जिओनोमा जिको र माईको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं बेलुका जानु पर्छ।
जिओन मुख्य सडक (शिज्यो डोरी) को दुबै तिर फैलन्छ जुन यासाका तीर्थदेखि सिज्यो कावारामाची सम्म जारी हुन्छ। धेरै परम्परागत जापानी काठको भवनहरू मुख्य सडकको दक्षिण क्षेत्रमा रहन्छन्। दक्षिणी तर्फ हानिकोकोजी नामको सुन्दर सडक छ र यो पर्यटकहरूको भीडले भरिपूर्ण छ। यस सडकमा माथिको दोस्रो चित्रमा जस्तै त्यहाँ धेरै महिलाहरू पनि छन् जो भाडा किमोनोको साथ हिडेका विदेशी पर्यटक हुन्।
क्योटो, जापान ऐतिहासिक वसन्त iraतु को मौसम Shirakawa जिल्ला मा = शटरस्टक
जुलाई २ Ma २०१ 24 को जापानको क्योटोमा जापान माटसुरी (फेस्टिवल) मा हन्नासाको परेडमा माइको केटी (वा जिको महिला)
मुख्य सडकको उत्तरी तर्फ पनि Gion Shirakawa भनिने एक अद्भुत सडक छ, जुन माथिको पहिलो चित्रमा देखाइएको छ। यस कब्बलस्टोन ट्रेलको वरपरको क्षेत्र विशेष गरी वसन्तमा सुन्दर हुन्छ जब चेरी खिलन्छ।
केही व्यक्तिहरू "गीशा वेश्याहरू हुन्" भन्ने गलतफहमी हुन्छन्। त्यो एकदम फरक छ। मैले उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको छु। तिनीहरू पेशागत हुन् जसले नाच, गायन र यस्तै अन्य अतिथिहरूको मनोरन्जन गरिरहेका छन्।
हरेक वर्ष जुलाईमा, जिओन मत्सुरी महोत्सव यासाका तीर्थको वरिपरि आयोजित हुनेछ। जिओन मत्सुरी महोत्सव क्योटोमा सबै भन्दा प्रसिद्ध फेस्टिवल हो। यो उत्सव करीव एक महिना को लागी आयोजित छ। यस समयमा जिओनको क्षेत्र जीवन्त छ। माथिको फोटोमा देखिएझैं Gion's Geiko र Maiko पनि फेस्टिभलमा सुन्दर किमोनोस लगाएका थिए।
>> जिओन मत्सुरी महोत्सवको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> फोटोहरू: गेशा, क्योटोमा गीशा (माइको र गेगी)
कम्मो नदी वा कामोगावा नदीमा सूर्यास्त, जिओन, क्योटो, जापानमा पुरानो घर र रेष्टुरेन्टहरू = शटरस्टक
दायाँको भवनलाई "युका" भनिन्छ, स्थानीय रेष्टुरेन्ट सिटो स्थान जहाँ कमोगावा नदी बाहिर देख्न सकिन्छ क्योटो, जापान = एडोबस्टक
कामोगावा नदी सुन्दर नदी हो जुन उत्तरबाट दक्षिणमा क्योटो शहरमा बग्दछ। यो नदी यति ठूलो छैन, तर पश्चिममा बग्ने कटुसुरगावा नदीको साथ यो क्योटोका नागरिकलाई धेरै परिचित छ।
त्यहाँ दुई बुँदाहरू छन् जुन म कमोगावा नदीको दृश्य पोइन्टको रूपमा सिफारिस गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले यो कामिगामो जिन्जा मन्दिरबाट शिमोगामो जिन्जा मन्दिरसम्मको तर्फ हो। यस क्षेत्रमा तपाई क्योटोको सुन्दर प्रकृतिबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
र दोस्रो, यो शिजो कावारामाची वरिपरि एक नदी पक्ष हो। यस क्षेत्रमा धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्। प्रत्येक वर्ष मेदेखि सेप्टेम्बर सम्म, यी रेस्टुरेन्टहरूले कामोगावा नदीमा काठको संरचनाका ठूला छतहरू स्थापित गर्दछ, जसरी माथिको फोटोमा देखाइन्छ। यस क्षेत्रमा कमोगावा नदीको मूलधारा बाहेक सहायक नदी पनि छ। रेस्टुरेन्टहरूले यस सहायक नदीमा टेरेसहरू सेट अप गर्ने छन्। यी टेरेसहरूलाई "युका" भनिन्छ। यी टेरेसहरू नदीमा छन् त्यसैले यो सुन्दर छ र तपाईं महान दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
क्योटोमा गर्मी धेरै तातो छ। त्यसोभए प्राचीन कालदेखि नै क्योटोका मानिसहरूले उनीहरूको जीवनमा विभिन्न सरलताहरू बनाए। यो "युका" ग्रीष्मकालमा रमाईलो गर्ने एक सरलता पनि हो। यदि तपाइँ ग्रीष्म Kyतुमा क्योटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया "युका" मा खाना सबै प्रकारका अनुभव गरी हेर्नुहोस्।
क्योटोमा पोन्टोचो जिल्ला। पोन्टोचो परम्परागत आर्किटेक्चर र मनोरन्जन = AdobeStock को प्रकारको संरक्षणको लागि प्रसिद्ध छ
पोन्टोचो शिजो कवारामाचीको डाउनटाउन क्षेत्रमा कामोगावा नदीको किनारमा अवस्थित एउटा सानो जिल्ला हो। परम्परागत दुई-मंजिला काठका भवनहरू लगभग meters०० मिटर उत्तर र दक्षिणतिर घुम्ने मार्गको दुबै छेउहरूमा लाइनहरूमा छन्। यहाँ सुविधाहरू छन् जहाँ गिशास नाच र गाउने अभ्यास गर्छन्, र जापानी रेस्टुरेन्टहरू जहाँ गीशाले ग्राहकहरूको मनोरंजन गर्दछ। हालसालै पर्यटकहरूका लागि स्टाइलिश रेस्टुरेन्ट र पबहरू बढेको छ र यो एकदम जीवन्त छ।
पोन्टोचो धेरै नै संकीर्ण छ, तर यो ट्रेलको क्योटोको परम्परागत वातावरण छ। म यहाँ हिँड्न सिफारिस गर्दछु।
पोन्टो-चोको कामोगावा नदी किनारका रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईले मे यु सेप्टेम्बरदेखि माथि परिचय गराउनुभएको "युका" भनिने टेरेसहरूमा खाना र खाजाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यो अनुभव क्योटोमा मात्र गर्न सकिन्छ। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
मानिस र पर्यटकहरू क्योटो, जापान = शटरस्टकको प्रसिद्ध निशिकी मार्केटमा ओइरिए
निशिकी बजारमा क्योटोमा परम्परागत मिठाइहरू पनि बेचिन्छ
निशिकी बजार एक किनमेल गर्ने जिल्ला हो जुन क्योटोको प्रिमियर सडक शिजियो-डोरीको उत्तरी किनारमा समान रूपमा 400०० मिटर दौडन्छ। यस किनमेल सडकको चौड़ाई मात्र -3--5 मिटर छ। करीव १ 130० स्टोर यहाँ भेला भएका छन्। यस किनमेल क्षेत्रमा छत छ त्यसैले तपाईं वर्षाले भिजेको चिन्ता लिनु पर्दैन।
यस बजारमा क्योटोमा विभिन्न विधाको खाद्य सामग्रीहरू बिक्री गरिन्छ। यो त्यस्तो स्थान थियो जहाँ केवल क्योटो नागरिकहरू मात्र आएका थिए, तर अब यो पर्यटक आकर्षण हो जहाँ धेरै पर्यटक आउँदछन्।
निशिकी बजारलाई क्योटोको फूडको थिमको साथ एक थिम पार्क भन्न सकिन्छ। यदि तपाईं यस शपिंग क्षेत्रमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईंले क्योटोमा तरकारीहरू, फलहरू, ताजा माछाहरू, परम्परागत मिठोहरू, सडकका खानाहरू, खातिर र यस्तै अन्य चीज देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई खान वा पिउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई सजिलैसँग खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र स्प्याटमा खान र पिउन सक्नुहुन्छ। सबै क्लर्कहरु दयालु र मैत्री छन्।
निशिकी बजार को बारे मा 1300 वर्ष को इतिहास छ। यस क्षेत्रमा चिसो पानी देखा पर्‍यो, त्यसैले माछावालाहरू ताजा माछाहरूलाई चिसो पार्न जम्मा भए। शपिंग क्षेत्र १ 17 औं शताब्दीको सुरूमा जन्म भएको थियो र क्योटोका नागरिकहरूले यसलाई "निशिकी" भनेर चिनिन्थे।
यदि मैले यो किनमेल सडकको बारेमा एक हानि उल्लेख गरेको छु भने, निशिकी बजार हालै धेरै लोकप्रिय भएको छ र त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन्। यो सप्ताहन्त र छुट्टी मा वास्तव मा भीड। त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु अपेक्षाकृत खाली बिहान र हप्ताको दिन भ्रमण गर्नुहोस्।
Daidokoro-zaka ढु stone्गा चरण जुन Neneno michi सडक र Kodaiji मन्दिर, क्योटो = शटरस्टक जडान गर्दछ
कोडाईजी मन्दिर क्योटो हिगाशीयामा जिल्ला जापान = शटरस्टकमा एक उल्लेखनीय मन्दिर हो
Kaizando हल कोडाईजी मन्दिरमा प्रमुख स्मारक हो। सब भन्दा सुन्दर समय नोभेम्बर, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा शरद theतु म्यापल पातहरू हुन्छ
कोडाईजी क्योटोमा कियोमिजुडेरा नजिकै एउटा ठूलो मन्दिर हो। यो कियोमिजुडेरा, किंकाकुजी इत्यादिको तुलनामा राम्रोसँग चिनिन सकेको छैन। तथापि, वास्तवमा यस मन्दिरको भ्रमण गर्नेहरू आश्चर्यचकित छन् कि त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन कोडिजीमा देख्न सकिन्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। कोडैजी मन्दिरको बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया तल हेर्नुहोस् ...
कोडैजी यासाका तीर्थको दक्षिणमा अवस्थित एउटा ठुलो मन्दिर हो। दक्षिण पक्षमा प्रसिद्ध किओमीजुदेरा छन्, त्यसैले त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन् जुन एकै समयमा कोडाईजी र कियोमिजुदेरा घुम्छन्।
यसलाई आधिकारिक रूपमा कोडैजी-जुशोजेन्जी मन्दिर भनिन्छ। १ 1606०1536 मा यस मन्दिरको स्थापना भएको हो। १y औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जापानको पुनर्मिलन प्राप्त गर्ने योद्धा हिडयोशी टोयोटोमी (१ 1598-१16 XNUMX)) को सम्झनामा उनकी श्रीमती नेने (किटा-नो-मन्डोकोरो) ले यो निर्माण गरे।
किओमिजुडेरा, किंकाकुजी इत्यादिको तुलनामा कोडैजीलाई राम्रोसँग चिनिन सकेन। यद्यपि, वास्तवमा यस मन्दिरको भ्रमण गर्नेहरू यस मन्दिरमा देख्न सक्ने थुप्रै चीजहरू देखेर छक्क पर्छन्।
भनिन्छ कि त्यहाँ काठको भवनहरू थिए जहाँ Hideyoshi बस्ने भव्य Fushimi महल बाट हस्तान्तरण गरिएको थियो। दुर्भाग्यवस, धेरै जसो धेरै आगोले जले। जहाँसम्म, "होजो" भनिने मुख्य हल पछि पुन: निर्माण गरियो, यसको जेन बगैचा पनि अद्भुत छ, र त्यहाँ एक शानदार चेरी रूख छ। त्यस पछाडि काइजान्डो र ओटामाया जस्ता पुराना काठका भवनहरू छरिएका छन्। बाँस जंगल पनि निको भयो। किनकि कोडाईजी पहाडको बीचमा अवस्थित छ, तपाईं क्योटोको भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ।
Kodaiji मा, प्रकाश प्रदर्शन अक्सर राती आयोजित गरिन्छ। उनीहरूलाई बौद्ध धर्मको शिक्षाको विषयवस्तु भनिएको छ।
यसबाहेक, कोडाईजी यसको सुन्दर शरद leavesतु पातहरूको लागि परिचित छ। यस अवधिमा पनि राती उज्यालो हुन्छ। पोखरीमा प्रतिबिम्बित चम्किलो रातो पातहरू साँच्चिकै उज्ज्वल हुन्छन्।
कोडाईजी मन्दिरको प्रवेशद्वारमा, "नेडे नो मिचि" भनिने सुन्दर सडकबाट "दैदकोरो-जाका" नामको ढु stone्गा माथि जानुहोस्।
>> कोडईजीको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
क्याफोटो, जापानमा शरद maतु म्यापल बिदा उत्सव मनाउन तोफुकुजी मन्दिरमा भीडहरू जम्मा भए। शटरस्टक
तोफुकुजी मन्दिर शरद leavesतुको पातहरूको चिह्नको रूपमा चिनिन्छ। यस मन्दिरमा करिब आधा पर्यटकहरू नोभेम्बरमा केन्द्रित हुन्छन् जब शरद पातहरू सुन्दर हुन्छन्।
तोफुकुजीमा भनिन्छ कि त्यहाँ धेरै सेरि रूखहरू थिए। यद्यपि, भव्य चेरी फूलहरू भिक्षुको प्रशिक्षणमा बाधा पुर्‍याइएको थियो र काटियो। यसको सट्टामा, यस मन्दिरमा म्यापल र अन्य लगाइयो, यसैले शरद leavesतुको पातहरू सुशोभित गरियो।
टोफुकुजी क्योटो शहरको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित जेन बौद्ध धर्मको रिन्जाई संप्रदायको तोफुकुजी विद्यालयको प्रमुख मन्दिर हो। यो १२1236 मा निर्माण गरिएको थियो।
तोफुकुजी शरद leavesतुको पातहरूको पहिचानको रूपमा चिनिन्छ। यस मन्दिरमा करिब आधा पर्यटकहरू नोभेम्बरमा केन्द्रित हुन्छन् जब शरद पातहरू सुन्दर हुन्छन्।
तोफुकुजीमा त्यहाँ सुन्दर काठको पुलहरू छन् जसलाई सुतेनकोयो, एंगेट्सुकियो भनिन्छ। ती पुलहरूबाट तपाईले यस बगैंचाको रूख देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बरको अन्तदेखि डिसेम्बरको सुरुतिर, तपाईं भव्य शरद पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
तोफुकुजी को लागी JR नारा लाइन र Keihin- हुन लाइन मा Tofukuji मन्दिर स्टेशन बाट १० मिनेट पैदल छ। यो शरद पातमा अत्यधिक भीड हुन्छ, त्यसैले म बिहान जान सुझाव दिन्छु।
यदि तपाईं क्योटोमा विशाल शरद worldतु संसारको अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने तोफुकुजी मन्दिर सिफारिस गरिन्छ। २००० मानचित्र तोफुकुजी मन्दिरको साइटमा रोपेको छ। नोभेम्बरको अन्तमा, तपाईं चहकिलो रातो पातहरूको संसारमा रमाउन सक्नुहुन्छ। विवरणको लागि कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका शरद ofतु को फोटोज ...
तोजीको पाँच-मंजिला प्यागोडा क्योटो = एडोबस्टकको स्थलहरू मध्ये एक हो
तोजी मन्दिर JR क्योटो स्टेशन मा Hachijoguchi (दक्षिण एक्जिट) बाट १ 15 मिनेट को पैदल मा एक ठूलो मन्दिर स्थित छ। यो किन्टेत्सु ट्रेनको तोजी स्टेशनबाट १० मिनेटको पैदल यात्रा हो।
क्युटो Japan औं शताब्दीको अन्त्यमा क्योटो जापानको राजधानी बने पछि टोजीलाई क्योटोको पूर्वपट्टि जोगाउन मन्दिरको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। तोजीको अर्थ जापानीमा "पूर्वको मन्दिर" हो। त्यस समयमा तोजी क्योटोको मुख्यद्वार (राशोमोन) को पूर्वी भागमा निर्माण गरिएको थियो, र उही समयमा साईजी (पश्चिमी मन्दिर) पश्चिम तर्फ बनाइएको थियो। यद्यपि साईजी हाल अवस्थित छैन।
तोजीसँग st 54.8..XNUMX मिटरको उचाईको साथ पाँच तले पागोडा (राष्ट्रिय खजाना) छ। यो काठको टावर जस्तो जापानमा सब भन्दा माथि छ। यो पाँच-मंजिला शिवालय क्योटोको प्रतीक हो किनकि यसलाई जेआरको शिन्कानसेनबाट देख्न सकिन्छ।
दुर्भाग्यवश यो पाँच-मंजिला प्यागोडा धेरै पटक आगोले नष्ट भयो। हालको टावर १ 1644 मा निर्मित पाँचौं पुस्ता हो।
रंगीन शरद inतुमा रातो म्यापल पातहरू सहित ब्यायोडिन मन्दिर, विश्व सम्पदा मध्ये एक र जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय यात्रा ठाउँ = शटरस्टक
ब्यायोडिन मन्दिर क्योटो शहरको दक्षिणी भागमा, क्योटो प्रान्तको उजी शहरमा अवस्थित एउटा सुन्दर मन्दिर हो। यो मन्दिर १० 1052२ मा योरिमची फुजीवारले निर्माण गरे जुन सर्वोच्च अधिकारी थिए। त्यस समयमा फुजिवारा परिवारको एक शक्तिशाली शक्ति थियो। बायोडिन मन्दिर फुजीवारा परिवारको गौरवको प्रतीक हो।
माथीको चित्रमा देखिए अनुसार बायोडियनमा सब भन्दा प्रख्यात "फिनिक्स हल (हुडो)" १० 1053 मा निर्मित छ। फिनिक्स हल जापानको १० येनको सिक्कामा कोरिएको छ।
फीनिक्स हलको सुन्दर आकार छ जस्तो कि फिनिक्सले आफ्नो पखेटा फैलाइरहेको छ। बायोडिनको वरपर धेरै चोटि आगो लागेको छ तर फिनिक्स हल मात्र यस प्रकोपबाट चमत्कारी ढंगमा जोगिए। फीनिक्स हलले पोखरीमा यसको सुन्दर आकृति दर्पण गर्दछ किनकि यो झन्डै १००० वर्ष पहिले थियो।
>> Byodoin मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
मुख्य गेट दैतोकुजी, क्योटो शहर, जापान = शटरस्टक
क्योटो, जापानको शेटारस्टकमा डाईतोकुजी मन्दिरको कोटोन मन्दिर
दायटोकुजी क्योटो शहरको उत्तरी भागमा रिन्जाइ सम्प्रदायको विशाल जेन मन्दिर हो। यो १1325२XNUMX मा निर्माण गरिएको हो।
उप मन्दिरहरू सहित दैतोकुजीमा २० भन्दा बढी काठका भवनहरू छन्। किनकि त्यहाँ केहि सब-मन्दिरहरू छन् जुन सधैं खुला रहन्छ, तपाईं सामान्यतया मात्र हिंड्न सक्नुहुन्छ। दैतोकुजीको छेउ एकदम शान्त छ त्यसैले तपाईं आरामपूर्वक टहल्न सक्नुहुन्छ। शरद Inतुमा धेरै सांस्कृतिक मन्दिरहरू र बगैंचाहरू सार्वजनिक हुनेछन्।
सब भन्दा लोकप्रिय उप मन्दिर कोटोन हो जुन हर समय खुला रहन्छ। यस उप मन्दिरको प्रवेशद्वार करीव meters० मिटर रूखहरुमा लपेटिएको छ र यसको अद्भुत वातावरण छ। कोटोनमा, कृपया सरल जेन गार्डनमा हेर्नुहोस्, जहाँ म्यापल र काई सुन्दर छन्।
>> दाइतोकुजी को विवरणका लागि कृपया यस साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
शरद, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा र्योआन्जी मन्दिरको सुन्दर सीढीहरू
Ryoanji (Ryoan-जी) मन्दिरमा जेन पत्थर बगैंचा। Rinzai स्कूल, क्योटो, जापान = AdobeStock को बौद्ध जेन मन्दिर
जापानी पर्यटकहरूले क्योटो, जापानको रियोआन्जी मन्दिरमा शान्तिको आनन्द उठाए। यो जेन बौद्ध मन्दिर यसको रक गार्डन = शटरस्टकका लागि प्रसिद्ध छ
रियानजी मन्दिर क्योटो शहरको उत्तरपश्चिममा अवस्थित एउटा जेन मन्दिर हो। यो किंकाकुजी मन्दिरबाट १ किलोमिटर पश्चिममा छ। यो मन्दिर यसको जेन बगैचा (रक गार्डन) मा धेरै प्रख्यात छ।
मलाई लाग्छ कि रियानजी मन्दिरको यो बगैचा जापानको जेन बगैंचामा एक नम्बर हो। यस जेन बगैंचाको अघि बसेको प्रभाव तपाईलाई फोटोहरूमा धेरै बताउन सकिदैन। रियानजीको जेन बगैंचाको अगाडि तपाई पक्कै पनि लाग्नुहुन्छ कि बिभिन्न विचारहरू तपाईको दिमागबाट अदृश्य हुन्छन्।
सन् १ 1975 XNUMX मा बेलायतकी रानी एलिजाबेथले जापानको आधिकारिक भ्रमण गरेपछि उनले रियान्जी भ्रमण गर्ने आशा राखिन् र यस जेन बगैंचामा बलात्कार गरे। कृपया चुपचाप यस बगैचा सबै तरिका बाट सामना गर्नुहोस्।
यो जेन बगैचा २ white मिटर चौडाई र १० मिटर गहिरो क्षेत्रमा सेतो बालुवा फैलन्छ र पूर्वबाट,, २,,, २ र 25 को १ 10 ठूला र साना ढु stones्गाहरू रहेको छ। यहाँ बेकारको केहि छैन।
र्योआन्जी विशाल छ र दक्षिण पक्षमा ठूला पोखरीहरू भएका सुन्दर बगैंचाहरू छन्।
>> र्योआन्जीको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
क्योटो gosho शाही महल पार्क = शटरस्टक मा वाकवे
क्योटो इम्पीरियल प्यालेस, क्योटो, जापान = एडोब स्टक
जोमे-मोन गेट, दन्तेइ र शिशिन्देन, क्योटो इम्पीरियल प्यालेस, जापान = शटरस्टक
क्योटो इम्पीरियल प्यालेसमा ठूलो पोखरी, क्योटो शहर, जापान = शटरस्टक सहित एक जापानी बगैचा पनि छ
क्योटो इम्पीरियल प्यालेस (क्योटो गोशो) एक त्यस्तो स्थान हो जहाँ विगतका सम्राटहरू बसोबास गर्थे र काम गर्थे, १th औं शताब्दीदेखि १ worked। Until सम्म। यो क्योटो शहर केन्द्रको उत्तर तर्फ छ। यस दरबार हालसालै सार्वजनिक रूपमा नि: शुल्क उपलब्ध भएको छ वर्षभरि (सोमबार बाहेक)। यदि तपाईं यस दरबारमा जानुभयो भने तपाईं जापानमा अदालतको संस्कृतिलाई नजिकबाट महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
क्योटो इम्पीरियल प्यालेसको नजिकको स्टेशन भने कारासुमा लाइनमा इमेडेगावा सबवे स्टेशन हो। यस स्टेशनबाट करीव minutes मिनेट पैदल पछि, तपाईं एक विशाल क्षेत्रमा पुग्नुहुनेछ (माथिको पहिलो फोटो) सुन्दर पर्खालहरूले घेरिएको। यो क्योटो इम्पेरियल दरबारको वरिपरि पार्क हो। यहाँ कुलीन वर्गका धेरै हवेलीहरू पहिले लाइनमा थिए। यस पार्कमा करीव minutes मिनेट पैदल पछि, तपाईं क्योटो इम्पीरियल प्यालेसमा "सेशोमोन गेट" मा पुग्नुहुनेछ। प्यालेजमा जानुहोस् यहाँ सामान जाँच गरेपछि।
क्योटो इम्पीरियल प्यालेसको साइट लगभग २ 250० मिटर पूर्व-पश्चिम र लगभग 450० मिटर उत्तर र दक्षिणमा छ। चारै पट्टि राम्रा पर्खालले घेरिएको छ, र त्यहाँ सिशोमोन गेट सहित कुल छ वटा गेटहरू छन्।
सेशोमोन गेट भएर जानु भएपछि, तपाईं जापानको रमणीय आँगन वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश क्योटो इम्पीरियल प्यालेसका काठका भवनहरूले धेरै चोटि आगोको आगो सल्काए र जलाइदै तपाईले देख्न सक्ने धेरै भवनहरू टोकुगावा शोगुनेटको युगमा निर्मित छन्, तर ती जापानका सबै उत्तम भवनहरू हुन्।
माथिको तेस्रो फोटोमा, रातो ढोका पछाडि देखिने विशाल भवन मुख्य हल "शिशिन्देन" हो। यहाँ, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण समारोहहरू आयोजना गरिन्छन्। शिशिन्देनको उत्तर पश्चिममा, त्यहाँ एक "सेरियोदेन" छ जहाँ सम्राटले कार्यालय गरे। यस बाहेक, तपाईं धेरै ठूला काठका भवनहरू र जापानी बगैंचाहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
क्योटो Japan 794 to देखि १1869 14 from सम्म जापानको राजधानी थियो। क्योटो शहरमा उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिममा सडकहरू खडा गर्ने आदेश दिइयो, मूल ढोका शहरको दक्षिणी छेउमा बनाइएको थियो, क्योटो इम्पीरियल प्यालेस थियो। सहरको उत्तरमा थोरै उत्तरमा निर्माण गरियो। वास्तवमा दरबारको ठाउँ धेरै पटक परिवर्तन भएको छ। १ XNUMX औं शताब्दीमा, क्योटो इम्पीरियल दरबार यसको हालको ठाउँमा बस्यो।
क्योटो इम्पीरियल प्यालेस वरपरका पार्कहरू सहित धेरै विस्तृत छ, त्यसैले कृपया बाटोमा नफर्कन सावधान हुनुहोस्। यदि तपाईं दिशामा गल्ती गर्नुहुन्छ भने, तपाईं धेरै लामो समयसम्म हिड्नुपर्दछ। विशेष गरी तातो गर्मी मा, यो धेरै तंग छ। क्योटो इम्पीरियल प्यालेसको विवरणहरूको लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट.
निजो महल = क्योटोमा, जापान = शटरस्टक
क्योटो शहरमा निजो महल मात्र महल हो। जबकि क्योटो शहरमा धेरै दर्शनीय स्थलहरू मन्दिर र मन्दिरहरू हुन्, निजो महल एक उच्च मौलिक पर्यटक आकर्षण हो। यदि तपाईंले क्योटोमा तपाईंको यात्रामा निजो क्यासल थप गर्नुभयो भने, तपाईं विविध यात्राको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
निजो महल १ Ky औं शताब्दीमा टोकुगावा शोगुनेटले क्योटोमा बेसको रूपमा निर्माण गरेको थियो। टोकुगावा शोगुनेटका कार्यकारीहरूले यस किल्लामा कुलीनहरू र प्रभुहरू भेटे। त्यसैले निजो दरबारमा टोकुगावा शोगुनेटको अधिकार देखाउन काठका भवनहरू बनाइए र भवनहरूमा राम्रा चित्रहरू पनि राखिए।
जब १ th औं शताब्दीमा टोकुगावा शोगुनेट नष्ट भएको थियो, यस किल्लामा अन्तिम टोकुगावा शोगुन योशिनोबु टोकगावा अधिपतिहरू भेला भयो र ऐतिहासिक बैठक खोल्यो। यदि तपाईं यस महलमा जानुभयो भने, तपाईं त्यस्ता जापानी इतिहास सहित मजा लिन सक्नुहुनेछ।
>> Nijo Castle मा विवरण को लागी, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
क्योटोमा Katsura Rikyu
Katsura Rikyu जापानी प्रतिनिधित्व गर्दछ कि एक अद्भुत जापानी बगैंचा हो। यो १th औं शताब्दीमा शाही परिवारले भिलाको रूपमा निर्माण गरे। यस समयमा अद्भुत बगैंचाहरू निर्माण गरिएको थियो।
क्योटोमा एक पटक यो भनिन्छ कि शाही परिवार र कुलीनहरूले थुप्रै जापानी बगैंचा उत्पादन गरे। ती मध्ये धेरै अब अवस्थित छन्। यस्तो अवस्थामा, Katsura Rikyu लगभग पूरै परम्परागत बगैचा कायम छ र यो धेरै विरलै छ।
हाल Katsura Rikyu इम्पीरियल घरेलु एजेंसी द्वारा प्रबंधित छ र भित्र जानका लागि तपाईले अग्रिम बुकि to गर्नु पर्छ। यद्यपि यसले अग्रिम आरक्षणमा समय र प्रयास लिन्छ, मलाई लाग्छ Katsura Rikyu अझै भ्रमण गर्न लायकको एक पर्यटक आकर्षण हो।
>> Katsura rikyu मा विवरणका लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
अरशीयामा क्योटोमा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो। यो क्योटो शहरको उत्तर पश्चिमी भागमा अवस्थित छ।
सही हुनको लागि, अरशियामा पहाडको नाम हो (उचाइ 381.5 XNUMX१. meters मिटर) तलको चित्रमा देखाइएको छ। यस पर्वतमा वसन्त inतुमा अद्भुत चेरी फूलहरू छन्। त्यस पछि, ताजा हरियो चम्किन्छ। शरद पातहरू गिरावटमा सुन्दर हुन्छन्। एक पटक, यस पहाडलाई माया गर्नुहुँदा, अगुवाहरूले यस क्षेत्रमा भिलाहरू बनाए। यसप्रकार, यो क्षेत्र प्रसिद्ध भयो, र अब यस क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा "अरशियामा" भनिन्छ।
त्यहाँ Katsuragawa भनिने एक सुन्दर नदी छ र नदी वरिपरि धेरै आकर्षक दर्शनीय स्थलहरु छन्।
Arashiyama यातायात को भीड पैदा गर्छ। यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु अरशियामा स्टेशनमा हन्कियु रेलवे वा केइहोकु इलेक्ट्रिक रेलवे प्रयोग गरेर।
अरशियामाको केन्द्रबाट १ 15 मिनेट पैदल हिड्ने JR सानिन मुख्य रेखामा सागा-अरशीयामा स्टेशन पनि छ। यदि तपाईं क्योटो स्टेशनबाट हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, जेआर ट्रेन द्वारा यो सुविधाजनक हुनेछ।
यदि तपाईं डिसेम्बरमा क्योटोमा जानुहुन्छ भने, म राती अरशियामा जान सिफारिस गर्दछु। तपाईं डिसेम्बर रातको मध्यमा अरशिअमामाको शानदार रोशनी "हनाटौरो" को मजा लिन सक्नुहुन्छ। केफुकु अरशियामा स्टेशनमा, तपाईले "किमोनो फरेस्ट" भन्ने रोशनी पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो सप्ताहन्तमा धेरै भीड हो, त्यसैले तपाईं जानु पर्छ ...
टोगेत्सुयो एक १155-मिटर पुल हो जुन कटुसरा नदीमा आराम गरेर बगिरहेको छ शरद Kyतु, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा सागा अरशिश्यामामा
टोगेत्सुको पुल कात्सुरागावामा सुन्दर पुल हो। अरशिआमा माउन्टेन पृष्ठभूमि सहित टोगेत्सुको पुलको दृश्य अक्सर दर्शक मार्गदर्शक पुस्तकहरू र अन्यमा पोस्ट गरिन्छ। नदीको छेउमा यो दृश्य हेर्दा तपाईको दिमाग निको हुन्छ।
यो पुल बाढीले धेरै पटक धोइसकेको छ र हरेक पटक पुनर्निर्माण गरिएको छ। हालको तोगेत्सुको पुल १ 1934 XNUMX मा बनेको थियो। अहिलेसम्म तोगेत्सुक्यो पुल काठको नभई प्रबलित क concrete्क्रीटबाट बनेको छ। ल्यान्डस्केपमा चोट नपु order्याउन, केवल रेलि beautifulहरू सुन्दर काठले बनेका छन्।
स्मारिका पसल र रेष्टुरेन्टहरू यस पुलको वरिपरि पंक्तिबद्ध छन्। यहाँबाट अरशिश्यामा क्षेत्रका विभिन्न दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमण गरौं।
होजुगावा नदी, अरशियामा, क्योटो, जापान = शटरस्टकमा शरद inतुमा पर्यटक डुat्गा
Katsuragawa मा Arashiyama देखि अपस्ट्रीम भाग होजुगावा नदी भनिन्छ। विगतमा काठ काठको माथिल्लो पहाडबाट क्योटो शहरमा Hozugawa नदी प्रयोग गरेर ल्याइएको थियो। माथिको तस्वीरमा देखिए अनुसार आज डु boats्गा पर्यटकहरूकोलागि दौडिरहेका छन्।
यो डु boat्गा जेआर कामोका स्टेशन नजिकैको प्लेटफर्मबाट अरशिअमामा १ 16 किलोमिटरको खण्डमा जान्छ। यात्रामा करीव 90 ० मिनेट लाग्छ। तपाईं नदी वरिपरिको प्रकृति र जापानी नदीको प्रवाहको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
JR Kameoka स्टेशनमा, तपाइँ JR सान-इन मुख्य लाइन को उपयोग गर्नु पर्छ। क्योटो स्टेशन बाट यात्रा समय train० मिनेट एक स्थानीय ट्रेन स्टप द्वारा।
Sagano रोमान्टिक ट्रेन (Torokko Ressha) भनिने एक पर्यटन स्थल ट्रेन संचालित छ र यो धेरै लोकप्रिय छ। यो भ्रमण गर्ने रेलको प्रयोग गरेर कामोका स्टेशन जान पनि राम्रो विचार हो।
परम्परागत जापानी किमोनो र रिक्शा लगाएका युवतीहरू अर्शियामाको बाँस ज forest्गलमा दर्शनीय स्थलहरूको लागि, अरशियामा क्योटोको जापानको पश्चिमी बाहिरी जिल्लामा रहेको जिल्ला हो: शटरस्टक
Togetsukyo ब्रिजको उत्तरी तर्फ अवस्थित Sagano जिल्लामा करोडौं बाँस रूखहरू फैलिरहेका छन्। यस बाँसको ज forest्गलमा एउटा ट्रेल छ, र यो ट्रेल पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छ। बाँस जंगलहरू केइहोकु इलेक्ट्रिक रेलवेको अरशिअमा स्टेशनबाट about मिनेट पैदल अवस्थित छन्।
यस बाँस ज forest्गलमा, तपाईं एक धेरै सुन्दर तस्वीर लिन सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्ति भाडा किमोनो लिन्छन् र फोटोहरू लिन्छन्। केही व्यक्ति टुरिस्ट रिक्शा चढ्छन् र यहाँ भिडियो लिन्छन्। जहाँसम्म, यो बाँसको जंगलमा भीड हुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु बिहान सबेरै जानुहोस् यदि तपाईं वास्तवमा राम्रो तस्बिर लिन चाहानुहुन्छ भने।
तेरेनुजी मन्दिरमा सोगेन पोखरी बगैचा। क्योटोको अरशीयमा जिल्लामा रहेको टेन्रयूजी मन्दिर। टेन्रयूजी मन्दिर जेन मन्दिर हो = शटरस्टक
टेर्रुजी एउटा ठूलो जेन मन्दिर हो जुन अरशिश्यामाको केन्द्रबाट5मिनेट जति पैदल छ। यस मन्दिर सुन्दर हिमालहरूको पृष्ठभूमिमा बगैंचाका लागि प्रसिद्ध छ, जसरी माथिको फोटोमा देखिएको छ। क्योटो शहरको बीचमा रहेका मन्दिरहरू यस प्रकारका सुन्दर पहाडहरूमा पृष्ठभूमिमा जान असम्भव छ।
टेन्रयूजी कुनै समय क्योटोको जेन मन्दिरमा पहिलो नम्बर हुने गर्थे। यद्यपि प्रायजसो काठका भवनहरू आगोले पटक पटक नष्ट भएका थिए। ज्यादै ठूलो साइट पनि संकुचन भयो। हालका ठूला काठका भवनहरू २० औं शताब्दीमा पुनर्निर्माण गरियो।
यद्यपि अरश्यामामा अवस्थित यस मन्दिरको बगैंचाले अझै धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। नोभेम्बरमा यो शरद पातहरू देख्ने पर्यटकहरूको भीड हुन्छ। त्यसैले म तपाईंलाई बिहान जान सुझाव दिन्छु।
क्योटोको टोइइ चलचित्र गाउँ, उज्ुमासा। प्रदर्शन जसले सामरियाको बिचमा तरवार र शटरस्टकको बीचमा द्वन्द्व देखाउँदछ।
Toei क्योटो स्टूडियो पार्क एक थीम पार्क एक फिल्म निर्माण कम्पनी Toei द्वारा संचालित हो। यस थिम पार्कमा, जापानी बुढ्यौलीको सडकहरू पुन: उत्पादन गरिन्छ, तपाईं त्यसमा हिंड्न सक्नुहुन्छ।
सडकहरू बीच, समुराई र निन्जाको पोशाकमा आएका कलाकारहरू हिँडिरहेका छन् र कहिलेकाँहि एक कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तपाइँ समुराई, निन्जा र यस्तै अरू प्रतिरूपण गर्न सक्नुहुन्छ।
यस थिम पार्कमा सिटीस्केप पूर्ण फिल्म हो र समुराई र निन्जा देखा पर्दछ कि चलचित्रहरू र नाटकहरूको लागि प्रयोगको लागि प्रयोग गर्न। यदि तपाईं समुराई र निन्जामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तोई क्योटो स्टुडियो पार्क अवश्य पनि रमाइलो स्मृति हुनेछ।
यदि तपाईं बच्चाहरूसँग यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं टोई क्योटो स्टुडियो पार्क जानुहोस्। म यो थिम पार्कमा पनि गए जब म आफ्नो परिवारसँग पहिलो पटक क्योटो गएँ। मेरा बच्चाहरूले भने कि क्योटोमा सब भन्दा रमाइलो चीज यो थिम पार्क थियो!
>> Toei क्योटो स्टूडियो पार्क मा विवरणको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ढुif्गा सीढी र परम्परागत लाइट पोल हिउँको हिउँसँगै किफ्यून मन्दिर, क्योटो प्रान्त, जापानमा शटरस्टक
यदि तपाईं जाडोमा क्योटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं हिमपातिक मन्दिरहरू वा मन्दिरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। क्योटोमा अहिले हिउँ परिरहेको छैन तर ग्लोबल वार्मिंगको कारण। जहाँसम्म किब्यून मन्दिरमा जानुहुन्छ भने, तपाईं हिउँले ढाकिएको सुन्दर मन्दिर चित्रण गर्न सक्नुहुनेछ जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ।
Kibune JR क्योटो स्टेशन को उत्तर को बारे मा २० किलोमिटर पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो क्योटो शहरको बीचको भन्दा गर्मीमा चिसो र जाडोमा चिसो छ। यदि तपाईं किबुन जानुहुन्छ भने, तपाईं परम्परागत जापानी परिदृश्य समृद्ध प्रकृतिमा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
किबुने मन्दिर सुन्दर शरद पातका लागि पनि परिचित छ। जे होस्, कृपया सावधान रहनुहोस् कि यो नोभेम्बरमा धेरै भीड हुनेछ।
मैले किब्यूनलाई पैदल यात्राको लागि सिफारिश गरिएको ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने लेख लेखें।
>> किफ्यूनमा विवरणहरूको लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> फोटोहरू: Kifune, Kurama, ओहारा जाडोमा-उत्तरी क्योटोको वरिपरि घुम्दै